Wali ma maqashay suuqa dadka meydadka ‘Souq of the dead’?! | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Wali ma maqashay suuqa dadka meydadka ‘Souq of the dead’?!
Posted by: radio himilo January 19, 2017
Jeddah – Waxaa jira suuq caan ah oo dhaca magaalo xeebeedka Jiddah ee dalka Sucuudiga oo lagu magacaabo Suuqa Meydadka kaas oo lagu iibiyo dharka ay sidan jireen dadka dhintay.
Suuqa ayaa dacalka ku haya suuq-weynaha al-Sawaariikh ee galbeedka Jiddah. Sababta ka danbeysa magacan ayaa ah in dharka badi la keeno halkan ay yihiin kuwo ay kusoo deeqeen xigtada iyo ehellada dadka dhawaan dhinta. Xaraashleyda ayaa hadaba dharkan ku iibiya qiimo jaban oo u dhaxeeya 5-20 Riyal.
Mohamed Ali Saleem, oo ah dhaqaalyahan cilmi-baare ayaa sheegay in macmiisha badi suuqa ka dukaameysata ay yihiin Afrikaan ama Asian oo lacag yar ka sameeya shaqada ay ka qabtaan Sucuudiga. Wuxuu tilmaamay in suuqu uu yahay mid shacbiyad leh – sababta oo ah deeqda ka timaada dadka dhinta ehelladooda waxaa ku jira agabyo iyo udug qaali ah oo aan meel kale laga iibsan karin. “Marka in halkan qofku yimaada, waxay u sahlaysaa in agabyo qaali ah uu ku iibsado lacag jaban,” ayuu xusay Saleem.
Suuqa al-Sawaariikh ayaa loo arkaa midka ugu weyn dunida oo ku fadhiya barabax dhan hal milyan oo wareeg ah dhul ku dhow – iyo dad ka badan 15,000 oo isku dhex kala goosha ganacsiga ka socda.
Waxaa intaas dheer inay jiraan wax ka badan 1,000 baqaarro ah oo ay ku keydsan yihiin agabyo kala duwan oo sahlaya fududeynta ganacsiga suuqa. al-Sawaariikh ayaa kamid ah ilaha dhaqaale ee ugu weyn Jiddah kaas oo camiran in ka badan 30 sanadood.
Waxaa lagu magacaabay al-Sawaariikh ‘Gantaalaha’ sababta oo ah waxay kaabiga ku heysaa xarunta militariga ee magaalada Jiddah.
Previous: Zidane: “Waxaan ku jirnaa waqti qaraar.”
Next: Guardiola: “Laga yaabee anigan ku fiicneyn guul inaan kooxda ku hoggaamiyo.”